Konkolaachisaan namoota akka cirachaatti gargalche – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKonkolaachisaan namoota akka cirachaatti gargalche
Konkolaachisaan namoota akka cirachaatti gargalche
Konkolaataa siinoo tiraak Fogaraatti namoota garagalche
Naannoo Amaaraa godina gondar Kibbaa, Aanaa Fogaraa jedhamutti konkolaachisaan siinoo tiraak jedhamu tokko namoota waaqefannaa amantaatii gara qe’eesaanii deebii’aa jiran fe’uun akka cirracaatti goodaatti dhangalaasee tokko to’annaa jala olfamu Ejansiin midiyaa naannichaa gabaase. barame.
(bbc)—–Gochi kunis namoonni akka cirrachaatti goodaatti yoo gargalfaman ajaa’ibas, dinqiis jedhameera.
Ejansichis waajjira poolisii aanichaatti itti gaafatamaa eeruun akka barreesseetti, konkolaatichi namoota 30 -40 ta’an erga fee’een booda waan kanfaltii irratti waliin hingaliin namoota fee’ee ture akka cirrachaatti garagalchuun miidhaa qaqabsiiseera.
Miidhaa wayita konkolaaticha irraa garagalfaman qaqabeenis namni tokko wayita ammaa kanatti mana yaalaatti wallaanamaa jiraachu barameera.
Hordoffii taasifameen konkolaachisaan qabamee qorannoon gaggeefamaa jiras jedhameera.
Getaasaw Yamaata namoota kabaja ayyaanichaa irratti kanneen hirmaatan keessa tokko yoo ta’u, haalicha akkasiin BBC’tti himeera.
Akkuma yeroo biraa barameetti tarii waan bataskaana sanaaf waada galan guuttachuuf kanneen namoota kabaja ayyaanaatiif deemaniif geejjiba bilisaa yoo kennan baayee gaariidha. Yoo ta’u baate ammoo namoonni walta’uun konkolaataa gara ayyaanichaa isaan geessu kireefatu. Kunis yoo ta’u baate ammoo miilaa deemu jedheera.
”Gara bakka sanaa deemuuf konkolaataan idilee hinturre,” kan jedhu Geetaasawu tilmaamaan fageenyi miilaan sa’aatii shan kan fidhatu kanas ayyaanicha irratti kan hirmaate yoo deemu konkolaata bilisaa Warrataa irraa argachuun akka ta’e dubbata.
Gara manaa deebii’uuf ammoo namoota biraa waliin ta’uun konkolaataa Sinoo tiraak yaabbattu. Imaltoota keessattis dubartootiifi daa’imman ni argamu turan.
Namoonni baayyeenis waan waadaa bataskaanichaaf (silatii)isaa baasuuf nu fehde jechuu gammachuu yaabbatan illeen osuma baayyee hinfagaatiin dirree tokko irra dhaabbachuun imaltoonni hundi tokkoon tokko isaanii qarshii 30 akka kafalan gaafate.
Imaltoonnis bilisaan yaabbannee hinkanfallu jechuun morman. Konkolaachisaan haala deebii jaraatiin aarees yoo diddan isiinan garagalcha jechuun sodaachisuu eegale.
Imaltoonnis nu hingaragalchiin jechuun muraasni irraa utaalu eegalan. Konkolaachisaan egaa yeroo kana warra hafan hunda akka cirrachaa ykn biyyootti namoota dirree irratti kan garagalche.
Innis haala kana waajjira poolisii aanichaatiif gabaasuu kan hime yoo ta’u, waajjirichis kunoo konkolaachisaa to’annoo jala olchuun iyyata namoota kanaatiif deebii kennu ibseera. Kun ajaa’iba miti?
Human rights under attack, no longer a priority; a pariah